Ciidamada Kenya oo gubay Xarun Isgaarsiin oo ay laheyd Hormuud +SAWIRRO | Wardoon
Home Somali News Ciidamada Kenya oo gubay Xarun Isgaarsiin oo ay laheyd Hormuud +SAWIRRO
Ciidamada Kenya oo gubay Xarun Isgaarsiin oo ay laheyd Hormuud +SAWIRRO
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Kenya oo ka soo tallaabay xuduuda ay u adeegsadeen burburinta xaruntaas qaraxyo, kaddib markii ay ku xireen Miinooyin.
Ciidanka ayaa jirdilay qof ka mid ah shaqaalaha shirkadda oo ku sugnaa xarunta iyo sidoo kale 2 qof oo dadka deegaanka ah.
Waxaa hawada ka maqan Isgaarsiinta Deegaannada Cali buley, Diif, Dhuyacgaroon iyo Girey oo ka kala tirsan Gobollada Jubada Hoose iyo Gedo, kuwaasoo xiriir ahaan ka qaadan jiray Xarunta la Gubey ee Calibuley Qadka Anteenada Isgaarsiinta.
Xarumahan ayaa Shacabka halkaas ku nool siin jiray adeegyo kala duwan oo isugu jiray Isgaarsiin iyo adeegga EVC oo muhiim u ah nolosha dadka halkaas ku nool.
Ciidanka Kenya ayaa sidan oo kale u burburiyey xarunta Calibuley Bishii August ee sanadkii la soo dhaafay, iyadoo tani ay noqoneyso markii labaaad oo geystaan Falkaan Burburinta ah, waxay Ciidankani horay u burburiyeen Xarumo ay laheyd shirkadda Hormuud Telecom oo ay kamid ahaayeen Ceelbaande, Dhamase, Khadiijo Xaaji , Dhegalaab iyo Dhuuntow oo ku wada tirsan Gobolka Gedo, waxayna xaruntan hadda la gubay noqoneysaa middii 7aad oo ay ciidamada Kenya si bareer ah u gubaan.
Ilaa hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay inay Ciidamada Kenya ugaarsadaan xarumaha Shirkadda Hormuud oo ay saami ku leeyihiin dad Soomaaliyeed oo aad u badan.
Previous articleMadaxweyne Xaaf oo ka badbaabay Weerarkii Nairobi
Next articleDAAWO:-Al Shabaab oo wali ka dhax dagaalamaysa dhismaha hotelka Dusit +SAWIRRO
Erdogan oo hanjabaad u diray Midowga Yurub+VIDEO
XOG:- Hogaamiyaasha Ahlusuna Ee Gobolada Dhexe oo wadda Dagaal ka dhan...